7 july အရေးတော်ပုံ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » History »7july အရေးတော်ပုံ
အဲဒီ ဆဲဗင်းဂျူလိုင်ကြီးက သဘက်ခါ ဆိုရောက်ပြီနော့…။
ဖတ်ရင်းနဲ့ ကြက်သီးထမိပါတယ်။ အဲဒီ့တုန်းက ကျောင်းသားတွေကိုလည်းအရမ်းလေးစားပါတယ်။ အခုလိုစုံစုံလင်လင်ပြောပြပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
အစပိုင်းပဲဖတ်ပြီး ဆက်မဖတ်ရဲတော့လို့ အဆုံးအထိမဖတ်တော့ပါဘူး….
ကြေးမုံဦးသောင်းရဲ့ “ဘီလူးတို့ ရွာ” ဘုတ်အုပ်ထဲမှာ ဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်ဗျို့ ။
သမိုင်းမှာ တကယ်ကို ယုတ်မာလွန်းခဲ့တဲ့ အစိုးရတရပ်အဖြစ် ဦးနေ၀င်းအစိုးရကို မှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုသမိုင်းတွေကို ဒီဘက်ခေတ်လူတွေအောင် များများရေးသင့်ပါကြောင်း….Thanks..
သမိုင်းမှာ တကယ်ကို ယုတ်မာလွန်းခဲ့တဲ့ အစိုးရတရပ်အဖြစ် ဦးနေ၀င်းအစိုးရကို မှတ်ချက်ပေးခံခဲ့ရတယ် ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီလိုသမိုင်းတွေကို ဒီဘက်ခေတ်လူတွေသိအောင် များများရေးသင့်ပါကြောင်း….Thanks…/ အခုလဲ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ပြန်ဖွဲ့ဖို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေကြပါပြီ.။
လေးလေးနက်နက် သေသေချာချာ ဖတ်ပြီး အကြောင်းအရာတွေကို ထည့်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဖတ်သွားပါတယ်ဗျာ..အဲဒီတုန်းက ကျောင်းသားတွေ တော် တော် သတ္တိရှိတာပဲနော်…သူတို.တွေရဲ. စိတ်ဓာတ်တွေကို အခု စာဖတ်ရင်းနဲ.ကို ခံစားလာရတယ်ဗျာ…
အဲဒီအချိန်က ပါလီမန်အုပ်ချုပ်ရေးခေတ်နဲ့ အလှမ်းမကွာတော့ လူတွေဟာ ကိုယ်ဘာလုပ်လို့ရတဲ့အခွင့်အရေးဆိုတာလည်းသိတယ်။ လုပ်လည်း လုပ်ရဲတယ် ။လုပ်ရမယ့်တာဝန်နဲ့ သတ္တိလည်းရှိတယ်။ ခု ကာလ လို နှစ်ပေါင်းများစွာ ကွာလှမ်းခဲ့တော့ ကိုယ့်အခွင့်အရေးကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပြောဖို့တောင် နောက်တွန့်ကြောက်လန့် နေကြတယ်။ အဲလို ဖြစ်အောင်လည်း တော်လှန်ရေးအစိုးရတက်ပြီးကတည်းက အာဏာရှင်နည်းစနစ်တွေနဲ့ တပည့်မွေး ဆရာမွေး အာဏာနဲ့ လက်နက်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက နည်း မှတ်လို့။
ဆရာသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်း စကားအတိုင်းဘဲ ဘယ်တော့မှ
သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အသက်သွေးချွေးကိုစွန့်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှုးပြု ကျောင်းသားထုတရပ်လုံးကို ဂုဏ်ပြုဦးညွှတ်ပါ၏။
အနှစ် ၅၀ တောင် ရှိခဲ့ပြီ။
အခုသတင်းတွေအရတော့… ဗကသခေါင်းဆောင်တွေအကုန် လိုက်ဖမ်းနေတာပဲ..
အရင်ကတည်းက.. အစိုးရကိုတိုက်တွန်းခဲ့တာ.. ထပ်ပြောမယ်..